गोरखापत्र – Page2– मझेरी डट कम
टिन टिन घण्टी बज्यो सविताले मोबाइल फोन उठाइन्, हलो भन्न नपाउँदै उताबाट अधवैँशे पुरूषको आवाज आयो – “धुलिखेलको सधैँ भेट्ने होटेलमा छु । तिमी छिटो यहाँ आइहाल । ट्याक्सीमा आउ जति लागे पनि लागोस् म तिरीदिउँला । छिटो आउनु आज थुप्रै काम छ ।”
कमरेडहरूले नाम परिवर्तन गरेपछि आफ्नो पुरानो नाम भुसुक्कै बिर्सिएर अङ्ग्रेजी नामबाटै परिचित हुन थाल्नुभयो उहाँ पार्टीमा । पार्टीका साथीहरूले राखिदिएको नाम साहित्यमा पनि रहन पुग्यो । झण्डै साढे ६ दशकअघिको कुरो यो । यतिखेर उहाँलाई राजनीति र साहित्य दुवै क्षेत्रले पछिल्लो नामबाट समेत बिर्सन थालेको छ ।
डा. सुशील दाहाल
हाम्रा पुर्खाले नेपालको चिकित्सकीय आदर्शका रूपमा भगवान् धन्वन्तरीलाई स्थापित गरेका छन् । जगत्कल्याणको सूक्ष्मतम् भावलाई ढुङ्गामा कुदेर अमरत्व प्रदान गर्ने हाम्रा पूर्वजले भगवान् धन्वन्तरीको मन्दिर पनि बनाएका छन् तर उनका मन्दिर जताततै भने सार्वजनिक स्थलमा त्यति पाइँदैन । वैद्यहरूको पुरानो वस्तीबीच काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रमा धन्वन्तरीको मन्दिर छ । जयवागीश्वरी स्थित नवाली टोलको ‘लुँहिटी’ ढुङ्गाबाट बनेको छ । यस मन्दिरमा राखिएको मूत्ािर् पनि ढुङ्गाकै छ ।
डा. रमेश मिश्र
कात्तिक कृष्णपक्ष त्रयोदशीको दिनलाई आयुर्वेदका प्रवर्तक भगवान् धन्वन्तरिको जयन्तीको रूपमा मनाउने प्रचलन छ । यस दिन आयुर्वेदका चिकित्सक, कविराज, वैद्य तथा आयुर्वेद सम्बन्धित अन्य सङ्घसंस्था अस्पताल, चिकित्सालयमा भगवान् धन्वन्तरिको पूजा गरिन्छ र आफ्नो र आफ्ना सबै रोगी र अन्य व्यक्तिको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ ।
नेपाली भाषका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शतवाषिर्की समारोह धुमधामका साथ मनाइनु सर्वथा स्वाभाविक हो । उहाँ बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँका साहित्यिक रचना असङ्ख्य छन् । उहाँद्वारा सिर्जित केही रचना अझै अप्रकाशित छन् । शतवाषिर्की समारोहको समयावधिमा उहाँका अप्रकाशित कतिपय रचना प्रकाशन भए । यो उल्लेख्य र उदाहरणीय योगदान हुनसक्छ- नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि ।
विराट काव्य प्रतिभाका धनी विश्वका नै एउटा महान प्रतिभा, महाकवि देवकोटा (वि.सं. १९६६-२०१६) प्रजातन्त्रप्रेमी, परम राष्ट्रवादी तथा मानवतावादी कवि हुनुहुन्थ्यो । नेपाली काव्य साहित्यका सगरमाथा महाकवि देवकोटा हाम्रा राष्ट्रका गौरव हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य जगत्का एक प्रतिभाशाली विद्वानको रूपमा चिनिने एउटा प्रख्यात विभूति ।
बुद्धि तामाङले पठाउनुभएको । ‘उत्तर आधुनिक आयाम र प्रशंसनीय दृष्टिकोण’ पुस्तकका विषयगत शीर्षकहरूले उत्सुकता जगाए । ‘उत्तर आधुनिकता’ पश्चिमी जगतमा पुरानिन लागे पनि नेपालका लागि नयाँ विषय बनेको छ । यसका व्याख्याताहरूका मतभेद र बाझाबाझ पत्रपत्रिकाहरूमा पढ्दै आएकोेले यस पुस्तकले त्यसबारे स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्छ कि भन्ने आशा जाग्यो । विषय शिर्षक पढ्दै जाँदा यो कृति सकारात्मक र नकारात्मक सोचहरूको व्यापक निवेचनद्वारा मानिसमा सकारात्मक सोच विचार र प्रवृत्ति बढाउन सघाउने ध्येयले लेखिएको खुलासा हुँदै गयो । यस कृतिमा ‘उत्तर आधुनिकता’ शीर्षक परेपनि पूर्वेली, पश्चिमी सकारात्मक विचार र व्यवहारका विषयका साथै आदिम युगदेखि अहिलेसम्मका र सिङ्गो विश्वदेखि नेपालभित्रका विभिन्न समुदायका विचार र प्रवृत्ति कोट्याइएका रहेछन् ।
जता जाउँ उतै भन्छन्
दसैं आयो । दसैं आयो ।
यही आनन्द वर्षाले
सबै सङ्कट बिर्सायो ।
नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय चाड विजयादशमी आश्विन शुक्ल पक्षमा प्रतिपदादेखि दशमी र त्यसपछि कोजाग्रतपूणिर्मासम्म मनाइन्छ । अश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनदेखि दशमीका दिनसम्म फूलपाती, महाअष्टमी, महानवमी र विजयादशमी लगातार चारदिनको यो महापर्व सम्पूर्ण हिन्दूहरूले अत्यन्त खुशीयालीपूर्वक मनाउँछन् ।
सबै राम्रा सबै ठाँटी
सबै नाना तमासामा
सबैका माथमा जौका
पहेला अङ्कुरा लामा
कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भनेजस्तै राम्रा-राम्रा पहिरनमा सजिएर निधारभरि दही अक्षताको राता टीका लगाएर शिरमा जमरा सिउरिँदै मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्न जानेहरूको यस अवसरमा विशेष चहलपहल देखिन्छ । त्यसैगरी ठाउँ-ठाउँमा लिङ्गे र रोटे पीङहरू हालेर त्यसको चहचहमा रमाउनेहरूको भीडले दसैंलाई थप आकर्षण प्रदान गरेको हुन्छ । भनिन्छ-दसैँ भनेको आपसी मित्रता, भेटघाट, सौहर्द्रता, मान्यजनप्रति सम्मान-सद्भाव र प्रेमजस्ता कुराको समष्टि स्वरूप नै हो ।
दसैँको अष्टमीको दिन बिहानैदेखि घरघरबाट मासुको हरहर बास्ना आइरहेको थियो । ललीताका बुबा पनि मासुको स्वादको कल्पना गर्दै जिब्रो फड्कार्दै खसी काट्ने तरखरमा लागेका थिए । खसी काट्दा चाहिने खुकुरी र रक्ती हाल्न चाहिने भाँडो उनको छेउमै थियो ।
भान्साघरमा आगो धुवाइरहेको थियो । ललीताकी आमा भान्सामा बसेर लसुन अदुवा र प्याज केलाउदै थिइन् । ललीता पिङमा मच्चिँदै थिई । “बाबा हेर्नुहोस् न मैले पिङ कस्तरी मच्चाएँ ।”
थारु जनजीवनका नाचहरू
आफ्नै भाषा, संस्कृति, चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म र संस्कार भएको थारू जातिका आफ्नै विशेष किसिमको मौलिकता र पहिचान रहेको छ । शिकार गर्ने, नाचगान गर्ने तथा खेती पशुपालनमा विशेषगरी आवद्ध यी जातिको विशेष किसिमको आफ्नै अस्तित्व तथा मौलिकता रहेको छ । मनोरञ्जनका लागि विशेष किसिमले आफ्नै गाउँघर समाजमा नाचकोर गर्ने र मनोरञ्जन लिने प्रचलन रहेको छ । यस जातिका नाचको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
गौतम बुद्धका सम्बन्धमा एउटा रोचक कुरा के रहेको पाइन्छ भन्दाखेरी मान्छेहरू आफूलाई मन परेका आदर्शका कुराहरू गौतम बुद्धले भनेका हुन् भन्ठान्दारहेछन् । भारतीय वामपन्थीहरू त एक समय बुद्ध र कार्लमार्क्सलाई एउटै कोटीमा राखेर कम्युनिष्ट विचार धारालाई फैलाउनतिर लागेका थिए । तिनीहरूको त्यस प्रयत्नबाट बुद्ध धर्मको पनि विकासमा केही योगदान पुगेको थियो । बुद्धका केही यस्ता मूलभूत कुराहरू छन् जोसँग कम्युनिष्टहरूको कुरासँग ठ्याम्मै मिल्दैन र आजभोलि तिनीहरू तर्किएका छन् ।
सानाचौरका साइँलाबूढा साह्रै छुच्चा थिए । अनिकाल महाकाल पर्दा पनि आफ्ना विश्वासिला छिमेकीलाई समेत ऐँचोपैँचो त के चौपाँजे पनि दिन्नथे । एकदिन धैयारे पखीर सेजवाल आफ्ना लालबाला भोकले छट्पटिन लागेको अवस्थामा धोक्रो काँधमा राखेर सानाचौर निस्केछन् । साइँलाबूढाका घरभित्र पसेर उनलाई ढोगभेट गरेपछि आफू अनिकाल लागेर पाथीचार कोदो माग्न आएको कुरा दर्शाएछन् ।
‘अन्त्यपछि’ बाट थालिएको यात्रा ‘अप्रिय’ सम्म आइसक्दा पनि उत्तिकै ‘प्रिय’ उपन्यासकारको पहिचान बनाउनुभएको छ उहाँले । २४ वर्षको उमेरमा २४ सालमा पहिलो उपन्यास छापिएपछि ६७ वर्षको उमेरमा ६७ सालमा उहाँको २५ औँ उपन्यास प्रकाशित भइसकेको छ । चारवटा संयुक्त उपन्याससमेत २५ वटा उपन्यास लेख्न सक्ने, त्यो पनि एकपछि अर्को उत्कृष्ट उपन्यास ।
उपत्यकामा भैरवका सयौँ मूर्तिहरू पाइन्छन् । कुनै सशरीर त कुनै टाउको मात्रै भएका । कान्तिपुरको मुख्य भित्री सहरी क्षेत्र वंधः अर्थात् इन्द्रचोकमा अवस्थित हाथु द्यः, आजु द्यः अर्थात् आकाश भैरवसँग परिचित नहुने सहरवासी कमै होलान् । आकाश भैरवको दक्षिणतिर पनि दुईवटा बडेमानका भैरवका मूर्ति छन् ।
रङ्गमञ्च फेरिएको छ । दृश्य फेरिएको छ, तर पात्र उही । दैनिक मञ्चन हुने नाटकका दुई पात्र छन्, निरन्तर ५३ वर्षदेखि निरन्तर । बिहान ६ बजे सुरू भएको रङ्गमञ्च राति १० बजेसम्म चल्छ । दर्शकविहीन रङ्गमञ्चमा सम्वादभन्दा बढी मौनता छ । उनीहरू आँखाले सम्वाद बोल्छन् । मनले अभिनय गर्छन् । ८६ वर्षे नायक भन्छन्-“बूढेसकालमा तिमी नै मेरी प्राण-प्रेमी, डाक्टर, नर्स र सबैसबै ।” नायिकाले भन्छिन्-“तिमीविना मेरो जीवन निरस-निरस छ । दैवले जुराई दिएको जोडी हो हाम्रो ।”
युवाको समूहले देशव्यापी रूपमा ‘अपराध किन बढ्छ’ भन्ने शीर्षकमा अन्तक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरे । देशमा अपराधिक क्रियाकलाप एकपछि अर्को गर्दै दिनप्रतिदिन बढिरहने क्रम जारि थियो । यसैले यो चिन्ताको विषय बन्न पुग्यो । युवाले विशेष चासो राखे । छलफलमा धेरैजसो युवाको नै सहभागिता थियो । देशको मेरुदण्ड अर्थात् विकासका कर्णधार भनेकै युवानै भएको हुँदा जोसिला र फूर्तिला युवा नै अग्रसर जागरुक देखिन्थे ।
मार्क्सवादी फ्रेडरिक जामेसनले नव मार्क्सवाद र उत्तर आधुनिकतावादको आधारमा आफ्नो सैद्धान्तिक योजना बनाएका थिए । उनले अर्नेस्ट म्यानडेलको अनुसरण गर्दै पूँजीवादको विकासका तीन तहमा प्रकाश पारे । उत्तर आधुनिकतावादलाई जामेसनले परपूँजीवादको सांस्कृतिक तर्क ‘कलचरल लजिक अफ लेट क्यापिलटलिम्ज’ भनेर अरथ्याएका थिए । जामेसन पूँजीवादको इतिहासका तीन तहको चर्चा गर्छन् ।